Luis Suarez oo ku celiyay guul uu horrey u gaaray Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Madrid) 25 Jan 2021. Luis Suarez ayaa ku guuleystey inuu ku hoggaamiyo kooxdiisa Atletico Madrid guul kale oo cusub, kulankii ay xalay la ciyaareen naadiga Valencia.
Valencia ayaa goolka daah furtay daqiiqadii 11-aad, laakiin Joao Felix ayaa dhaliyay goolka bar-baraha daqiiqadii 23-aad, kahor inta uusan Luis Suarez dhalin goolka labaad ee ciyaarta, halka uu Angel Correa ciyaarta ka dhigay 3-1.
Sida laga soo xigtay shabakadda ciyaaraha “Opta” ee ku can baxday tirakoobyada iyo rikoorrada, Luis Suarez ayaa dhaliyay 12 gool 15-kiisii ​​kulan ee ugu horreeyay horyaalka Spain ee uu la ciyaaray kooxda Atletico Madrid, taas oo ah bilowgii ugu fiicnaa ciyaaryahan ka tirsan koox ee tartan, tan iyo markii uu Cristiano Ronaldo sidaan oo kale ku sameeyay Real Madrid sanadkii 2010, isagoo dhaliyay 13 gool.
Luis Suarez ayaa wali awood u leh inuu dhaafo rikoorkan, iyadoo 18 kulan ay ka harsan tahay horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan, wuxuuna weeraryahanka reer Uruguay sameynaa qaab ciyaareed cajiib ah, wuxuu gaari karaa rikoorro ka wanaagsan rikoorradii uu ku gaaray Barcelona.
Suarez ayaa hoggaaminaya miiska gooldhalinta horyaalka Spian, wuxuuna kala siman yahay weeraryahanka Seville Youssef En-Nesyri iyagoo wada leh min 12 gool, halka Lionel Messi uu ku jiro kaalinta labaad isagoo leh 11 gool, laakiin wuxuu sababo ganaax ku seegay kulankii Elche.